ahụike na ọgwụ | Ozi bara uru maka onye ọ bụla.
Akwụkwọ: ahụike na ọgwụ
Etu esi eme ihe maka ụkọ vitamin ụkọ mmiri
Ihe na 29.01.2020 29.01.2020
Oge opupuwo mmiri. N'ụtụtụ, ụmụ nnụnụ na-abụ abụ na mpụga na windo, mana ọ siri ike iteta, mgbe ọrụ gasị, ike adịghị ezu maka ihe ọ bụla. Ọtụtụ mgbe enwere mmetụta na echi ...
Gịnị mere ndị Russia ji amasị sịga Belarusian?
Mmadu enweghi ike ichota anwuru Belarus na ulo ahia Russia taa. Ndị na-ese anwụrụ, dịka iwu, ga-enwerịrị afọ ojuju na ngwaahịa ụlọ. Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ha agaghị ajụ ngwongwo nke mba agbata obi enyi. Nkọwa ...
Vitamin "Multifort": nyocha, ntuziaka maka ojiji, ihe mejupụtara na nkọwa
Ka ọ na-erule ngwụsị oge oyi, ọtụtụ ndị mmadụ na-eme mkpesa na ahụike adịghị mma. Ike ọgwụgwụ, ura, na iwe na-apụta, akpụkpọ ahụ na-adaa, ntutu na-anyụ anyụ. Ndị a bụ ihe mgbaàmà na-ahụkarị ndị mmadụ n'oge a. Ihe kpatara ya bu ihe kariri ...
Otu esi eme ka mmadu nwee uche na uzo esi abanye n'ulo ogwu. Kedu otu ndi mmadu si eche echiche
Ọtụtụ ndị mmadụ, ọkachasị ndị ntorobịa nke oge a, nwere mmasị etu ha ga-esi bụrụ onye na-eme uche mmụọ. N’ezie enweghị ike ịkpọ ajụjụ a ziri ezi. Ihe dị na ya bụ na ị gaghị akpachara anya bụrụ mmụọ gbasara mmụọ ma ọ bụrụ na i jiri mmụọ gị niile kpughee ...
AED inhaler: ụdị, ntuziaka na nyocha. Nebulizer NA
Cheta na na nwata, nne na nne nne kwenyere na onweghi ihe di nma ma obu oria karie inha karie nduku? Remember na-echeta mmetụta gị? Ihu na-acha ọbara ọbara, ihu dị ọkụ, nnukwu mmiri ọsụsọ, ...
Lymphoma Mediastinal - gini ka ọ bụ? Mgbaàmà, nyocha
Ihe na 15.09.2019 29.11.2019
O bu ihe nwute, n'ihi oke onodu gburugburu obibi, ndi oria oria na aru karia kwa ubochi. E nwere ọtụtụ ụdị nke etuto ọjọọ. Ha na - enwe ike itolite na akwara di iche iche, na- emebi oru ha.
Ihe ọṅụṅụ Pancreatic: nkọwa, mejupụtara, ọrụ na atụmatụ
Ihe ọ juiceụụ Pancreatic bụ mmiri mmiri nke pancreas na-emepụta. O yiri alkaline, mmiri doro anya, na-enweghị ụcha. A gland nọ n'azụ peritoneum ma sonyere spain n'ogo nke 1 na 2 vertebrae…
Okenye okenye na feces.
Ka ọ dị ugbu a, n'ọkwa nke mmụta miri emi na ọgwụ, akara nke ọrịa ahụ na mmetụta uche onye ọrịa nwere oke mkpa, ebe ọ bụ na dabere na data ndị a ka emere nchọpụta nke mbụ. N'ezie, ụdị…
Ọrịa Neurological: ụdị, nkọwa, akara na ọgwụgwọ
Ọrụ ndụ mmadụ zuru oke na-adabere na ahụike nke ụbụrụ na akwara ozi. Yabụ, ọrịa ndị na-emetụta akụkụ ahụ ndị a na-eme onwe ha ka ọfụma na -agabiga ma mgbe ụfọdụ ọrịa siri ike. Otu onye…
Etu ị ga-esi mee ka obi dị jụụ: ọgwụ "Nebilet", analogues na mejupụtara
Ihe na 15.09.2019 15.11.2019
Kwa afọ ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ na-arịa otu ọrịa obi na usoro akwara. Ọzọkwa, dị ka ndị dọkịta chọpụtara, ọtụtụ ndị na-eto eto na-echigharịkwuru ha maka enyemaka na ...
Mbufụt nke canal cervical: akpata, nchoputa, ọgwụgwọ
Ọrịa oria akụkụ nke akụkụ ahụ nke nwanyị na-ebute ọmarịcha ọnọdụ n'etiti isi ihe na-akpata ịmụ nwa na ụmụ nwanyị. Ha na-esonyere site na mwepu ma na-enwe ahụ erughị ala na ala ala. Ọtụtụ ụmụ nwanyị na-eleghara ...
Ọgwụ 'Cordiamin': ntuziaka maka ịdọ aka ná ntị ...
Ọgwụ "Cordiamin" bụ otu n'ime ọgwụ ọgwụ a nwere ike ịzụta na-enweghị ọkwa n'ụlọ ọgwụ. Peoplefọdụ ndị na-a -ụ ọgwụ onwe ha na-eji nke a. Ha na-a medicineụ ọgwụ iji belata ihe mgbu n’obi?
Ndị na-asa ahụ Bischofite: ihe ndị na-egosi na contraindications, atụmatụ nke iji ya na ndụmọdụ
Mmadu nwere ike ikwenye na ọrụ ebube ga-eme, ma nsogbu ya ghasaa site n'onwe ha. Ọtụtụ na-etinye usoro a dabere na ahụike ha. Mana ọ bara uru ịtụle nke ahụ ọbụna maka ...
Norepinephrine bụ ... Ọrụ nke norepinephrine
Norepinephrine bụ ọgwụ ezinụlọ nke catecholamine na-arụ ọrụ n'ime ahụ dịka homonụ na-akpata nchekasị na neurotransmitter na-amụ anya. A na-emepụta ihe ahụ n'ime akwara adrenal yana ụbụrụ. Hormones nke oke iwe na ụjọ Adrenaline ...
Callus. Ogwu na aka. Ọkụ ụkwụ na ụkwụ
Mmiri callus nwere ike ịpụta na onye ọ bụla. Ọ na - ebilite n'ihi nrụgide siri ike na mpaghara ọ bụla nke anụahụ. N'oge ọkọchị, nsogbu ndị dị otú a na-apụta na ịchebe pụrụ iche, n'ihi na oge ọkọchị bụ oge ọkọchị ...
Sternum-clavicular nkwonkwo: usoro
Ihe na 15.09.2019 07.11.2019
A naghị ahụ ihe sternum-clavicle anya mgbe niile. Ọ na - egosipụtakarị na ndị nwere oke ma ọ bụ na - ajụ ase. Na ọnụnọ nke ntakịrị obere abụba subcutaneous, enwere ike ịtụle ya. N'ime ndị nkịtị ...
Ọ na-apụta mgbe ị na-ekpe ekpere
Ọ bụ ihe nwute na oge ụfọdụ, ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị a na-enwe oke mkpọtụ dịka itching n'oge nsọ nwoke. Maka ihe kpatara ya, ọ naghị adịkarị mfe ịchọpụta ya. Ọ bụ ya mere na n'ihe banyere…
Kedu ihe kpatara akwa ji enwe akwa?
Itching na perineum n'ime ụmụ nwoke nwere ike ime n'ihi ọtụtụ ebumnuche. Ọ bụrụ na ọ dị gị ka àkwá gị na-egbu mgbu, mgbe ahụ, gaa na dibia ọgwụ ụrọ n’achọpụtaghị ezigbo ihe kpatara ya…
Clinic "Altravita": nyocha banyere ndị dọkịta
Ọtụtụ na-etolite ezinaụlọ ọ bụghị naanị iji bie ndụ ha na onye ha hụrụ n'anya, kamakwa na ebumnuche nke ịmụ ụmụ siri ike ma nwee obi ụtọ. O bu ihe nwute, nsogbu nke enweghi umu ugbua ezugo…
Metastasis na ụbụrụ: nchọpụta dị egwu na ezigbo nyocha
Kwesighi ịbụ dọkịta iji nwee ntụkwasị obi mara na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrịa niile na-egosipụta ihe dị iche iche na-egosipụta 'ike' ha iji metastasize, ya bụ, ha nwere ike ọsọ ọsọ na-asọ site na lymph ma ọ bụ ọbara na ahụ ndị ọzọ. Na-aga dị ka nke ahụ ...
Ajuju 14 na nchekwa data emepụtara na sekọnd 0,428.